नेपाल एयरलाइन्सको चरम लापरबाही : दुबई उड्नुपर्ने जहाज पुग्यो मलेसिया ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
नेपाल एयरलाइन्सको चरम लापरबाही : दुबई उड्नुपर्ने जहाज पुग्यो मलेसिया !
नेपाल एयरलाइन्स व्यवस्थापनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दर्जनौं कर्मचारीले राजनीनामा दिइरहेएकै बेला एयरलाइन्सले अर्को वितण्डा मच्चाएको छ ।
यता पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार विमान दुबई नउडेर मलेशियाका लागि उडेपछि नेपाल र मलेशियातर्फका २२० जनाको हाराहारीमा रहेका यात्रुहरु समस्यामा परेको बताइएको छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा मोबाइल अफ थियो भने प्रवन्ध निर्देशक सुगतरन्त कंसाकार सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
सोमबार मात्रै नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीले व्यवस्थापनसँग असन्तुष्टि जनाउँदै धमाधम राजीनामा दिन थालेको खबर रातोपाटीले प्रकाशित गरेको थियो ।
पछिल्लो समय व्यवस्थापनपक्षले संस्थालाई सुधार गर्नुको साटो थप धराशयी बनाउने बाटोमा अघि बढेको असन्तुष्ट कर्मचारीहरुको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
यसविषयमा भने कंसाकारले १५ सय कर्मचारीमा एक दुईजना कर्मचारीले आफूलाई फेल गराउन लागिपरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
उनले ती कर्मचारीले जथाभावी आफ्नो र कम्पनीको बारेमा नराम्रो हल्ला फैलाएको दाबी गर्दै भनेका थिए ‘एक जना कर्मचारी पीआरवालाले जागिर छाडेको हो । अर्को दुईजनाले दुईरचार बर्ष बाँकी रहेपनि अहिले आफ्नो घरायसी कामको समस्या देखाउँदै छाडेका हुन् । अर्को एक जनाले प्रमोशन भएन भनेर जागिर छाडे । प्रमोशनपनि उहाँलाई लिएको परीक्षामा फेल भएपछि रोकिएको हो । हामी व्यवस्थापनको कुनै दोष छैन ।’
कंसाकारले कर्मचारीमाथि खनिएर उम्किने प्रयास गरेपनि पछिल्लो समय उडानै रद्द गरेर नयाँ गन्तब्यमा उडान भरिनुले निगममाथि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।